Beyonce na Africa, The Bluff: American Superstar reuses maka ịkwalite ihe oyiyi nke Senegal film "Touki Bouki" na-enweghị na-ezo aka ya isi, ma ọ bụ mee mmegharị kwupụta nwebisiinka ... ma ma ọ bụrụ na ego ya sitere na omenala ọdịbendị nke Africa dị ọtụtụ, onye na-ese ihe na-anọgide na-enweghị mmasị n'ihe nkiri nke kọntinent ahụ
Site na: KongoLisolona: March 31, 2018 00: 30 Enweghị asịsa
A ghaghị ikwenye na foto ahụ mara mma. Beyonce et Jay-Z na-agba ịnyịnya ígwè buru ibu, otu okpokoro isi na-ekpuchi aka. Ha na-ele anya na mbara igwe, ndị meriri. Ọ bụ onyinyo a, wepụtara na netwọk mmekọrịta 12 March 2018, bụ nke a họọrọ iji kpọsaa ọhụụ ụwa ọzọ nke di na nwunye. Ewezuga nke ahụ, gbasaa na-enweghị nkọwa ndị ọzọ, ọ dịghị anya iji tụnyere usoro ihe nkiri nke 1973, Touki Bouki, site na onye na-ese ihe na Senegal Djibril Diop Mambéty.
Ihe kachasị mma bụ nke dị nnọọ anya site na ụwa nke hip-hop hop, dịka ọ bụ akụkọ banyere ụmụaka abụọ na-eto eto Dakarese, onye na-azụ atụrụ na nwa akwụkwọ, na-agbalị ịgbalaga mba ha .
Otu nwere ike ịnata "ụtụ" a na-egosi ihe nkiri Sentina, ma kwuo na, ịma ama nke inyere superstars aka, ọ ga-eme ka ọhụụ ahụ nwee ike izute ndị na-ege ntị ọhụrụ. Ma mbinye ego ahụ, nke a na-emezughị, wetara ajụjụ ndị ọzọ. Mbụ, n'ihi na onye nwe ikike nke onye nduzi, nwa ya nwoke Teemour Diop Mambéty, anaghị atụle ya tupu mgbake a, dịka ọ kọọrọ onye nta akụkọ Elisabeth Franck-Dumas (mwepụta nke 12 March 2018).
Ọkt24 11: 28
iru mmiri 56%